Guinea: fikasana hamono an’i Dadis Camara, lehiben’ny miaramila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Desambra 2009 6:39 GMT
Araka ny voalazan'ireo loharanom-baovao maro, ny kapiteny Dadis Camara, lehiben'ny miaramila izay nandray ny fahefana tany Guinea tamin'ny Desambra 2008 avy amin'ny fanonganam-panjakana, dia notifirin'ny mpanampy azy ary naratra omaly tany Conakry. Ity lehiben'ny Governemanta nijoro ho azy any Guinea ity, nomelohin'ny firaisambe iraisam-pirenena nanomboka ny 28 Septambra noho ny famonoana sy fanolanana, dia nafindra maika any Maroka , ary tonga tany tamin'ny 3 ora hariva GMT. teo ho eo.
Ny Major Kélétigui Camara, Sekretera jeneraly ao amin'ny Fitondrana, dia niteny avy tamin'ny alalan'ny antso avy amin'ny finday [Fr], niaraka tamin'nuy vohikala guineenews.org fa nisy olona roa maty, izay tsy fantany ny mombamomba azy ireo. Nisy mpikambana roa hafa ao amin'ny mpanongam-panjakana ihany koa nafindra maika any Maroka.
Fanehoan-kevitra vitsivitsy mialoha momba ilay vaovao tao amin'ny vohikalan'ny RFI no naneho hevitra maro. Hoy ny mpamaky iray tsy mitonon-tena nanoratra:
Na eo aza izany, ny ankamaron'ireo mpamaky, izay mametraka an'i Camara ho tompon'andraikitra tamin'ny famonoana ireo mpanohitra tamin'ny 28 Septambra, dia mihevitra fa rariny ity andrana hamono azy ity.